Maxkamadda ciidamada ee Jubbaland oo xukuntay askar - Halbeeg News
AFMADOW(HALBEEG) Maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee Jubbaland ayaa maanta magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada hoose ayaa xukunno kala duwan ku riday askar ka tirsan ciidamada oo lagu soo eedeeyay dambiyo kala duwan.
Askartan xukunka lagu riday oo gaaraya lix qof ayaa labo ka mid ahi waxaa lagu xukumay min afar sano oo xabsi kuwaasoo kala ah Jaamac Mukhtaar Maxamed 32, Cabdiraxmaan Xuseen cabdulahi, 36. Askartaan oo ka tirsan ciidamad booliska Afmadow ayaa lagu eedeeyay inay ka bexeen difaaca ciidamada.
Cismaan Kulaal Xassan oo 30 jir ah ayaa lagu eedeyay in rasaas uu furay uu ku dhintay Cabdi Aadan Yusuuf oo ka tirsanaa booliska Jubbaland kadib markii la isku dayay in la qabto, Cismaan Kulaal Xassan, Cabdiraxmaan Xuseen Cabdulahi iyo jaamac Mukhtaar Maxamed, xili ay ka soo baxeen difaaca, waxana lagu xukumay askariga dilka geystay inuu bixiyo diyada marxuumkii dhintay.
Gaashanle dhexe Bashiir Maxamuud Xareed oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa sheegay in maxkamadda ay sii deysay Dalal Cabdiqaadir Cali oo 32 jir ah, Aadan faarax Maxamuud, oo 36 jir ah iyo Axmed Xaaji Muxumed 50 jir, kadib markii ay ka laabteen gadoodka lagu soo eedeyay ka hor inta aysan falka geysan saxiibadooda maanta la xukumay.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhowr jeer xukunno kala duwan ku riday askar ka tirsanaa ciidamada kuwaasoo lagu soo eedeyay dambiyo kala duwan.